GIMP मा GIF कसरी बनाउने | क्रिएटिभ अनलाइन
केहि समय पहिले हामीले तपाईलाई सिकायौं Photoshop मा एक gif बनाउन, विशेष गरी Illustrator को प्रयोग गरेर, जुन कार्यक्रम हो जसले तपाईंलाई गतिशील छविहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। र, यस पटक, हामी पनि त्यस्तै गर्न चाहन्छौं तपाईलाई GIMP मा gif कसरी बनाउने भनेर सिकाउँदै।
यदि तपाइँसँग फोटोशप छैन र तपाइँ एक प्रोग्राम प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ जुन बराबर छ, वा त्यो, धेरैको लागि, यसलाई पार गर्दछ, जस्तै GIMP, तपाइँ यसलाई प्राप्त गर्नको लागि चाल्नु पर्ने चरणहरू यहाँ छन्।
1 GIMP भनेको के हो
2 GIMP मा चरण-दर-चरण GIF कसरी बनाउने
2.1 GIMP कार्यक्रम खोल्नुहोस्
2.2 चयन गर्नुहोस्, सम्पादन गर्नुहोस् र प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
2.3 नयाँ लेयर
2.4 हिट गर्दै
2.5 नयाँ तहसँग काम गर्दै
2.6 एनिमेशन बचत गर्नुहोस्
2.7 GIMP सँग gif बनाउनको लागि एक अतिरिक्त चाल
GIMP भनेको के हो
GIMP वास्तवमा एक हो छवि सम्पादन कार्यक्रम जुन, धेरै को लागी, समान र फोटोशप जस्तै पेशेवर छ। यो दुबै शुरुआती प्रयोगकर्ताहरू द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ, मध्यम ज्ञान र ग्राफिक डिजाइनमा समर्पित पेशेवरहरू।
तर सबै भन्दा राम्रो पक्ष यो हो कि GIMP एक नि: शुल्क कार्यक्रम हो, जसले यसलाई प्रसिद्धिमा कैटापल्ट बनाएको छ र धेरैले यसलाई स्थापना गर्न र तिनीहरूको आफ्नै डिजाइनहरू सिर्जना गर्नका लागि तिनीहरूको छविहरूसँग गडबड गर्दछ।
अब, यसको सञ्चालनको सर्तमा, यो फोटोशप भन्दा अलि बढी जटिल हुन्छ, किनकि यो त्यति सहज छैन, तर यदि तपाइँ यसलाई मास्टर गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ फोटोशपको साथ जस्तै, र अझ राम्रो गुणस्तरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
GIMP का निर्माताहरू दुई विद्यार्थी थिए, स्पेन्सर किमबल र पिटर म्याटिस, जसले, एक सेमेस्टर अभ्यासको रूपमा जुन उनीहरूले बर्कले विश्वविद्यालयको कम्प्युटर क्लबमा प्रस्तुत गर्नुपर्‍यो, यो कार्यक्रम सिर्जना गर्नुभयो, दुबै "घर" र व्यावसायिक प्रयोगकर्ताहरूको लागि नि: शुल्क अनुप्रयोग।
साथै, कार्यक्रमले केहि सन्दर्भहरूमा फोटोशपलाई माथि राख्छ, जसरी हामीलाई यस लेखमा लैजान्छ, GIMP मा GIF कसरी बनाउने, किनभने अर्कोसँग हामीलाई यसको संलग्न कार्यक्रम, इलस्ट्रेटर, यो गर्न सक्षम हुन आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, GIMP मा कुनै बाह्य कार्यक्रम आवश्यक छैन तर हामी यसमा गर्न सक्छौं।
GIMP मा चरण-दर-चरण GIF कसरी बनाउने
GIMP को बारेमा अलि बढी थाहा पाएपछि र तपाईंले यसलाई आफ्नो कम्प्युटरमा किन स्थापना गर्नुपर्छ, हामी तपाईंलाई यस कार्यक्रमको साथ एक gif सिर्जना गर्न र राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्ने कुञ्जीहरू दिनेछौं। निस्सन्देह, हामी काम गर्न तल जानु अघि यो आवश्यक छ कि तपाईलाई आवश्यक पर्ने सबै कुरा हातमा छ, यस अवस्थामा यो हुनेछ:
तपाईंको कम्प्युटरमा स्थापित GIMP कार्यक्रम। तपाईले विन्डोज, लिनक्स वा म्याक प्रयोग गर्नुभए पनि फरक पर्दैन, यो तीनवटै अपरेटिङ सिस्टम र अन्य धेरैका लागि उपलब्ध छ। साथै, यसमा धेरै भाषाहरू छन्।
छवि वा छविहरू जुन तपाईंले gif मा रूपान्तरण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। तपाइँ एकल छविको साथ केहि सरल गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाइँ यसलाई परिवर्तन गर्न धेरै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, एक प्रकारको ब्यानर, जुन ग्राहकहरु माझ धेरै अनुरोध गर्न सकिन्छ। तपाईंले काम गर्ने तस्बिरहरू नि:शुल्क छवि बैंकहरूबाट आएका हुन् वा तपाईंले तिनका लागि भुक्तानी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। इन्टरनेटबाट मात्र नलिनुहोस् किनकि तिनीहरू प्रतिलिपि अधिकार हुन सक्छन्।
अब जब तपाईंसँग यो सबै छ, सुरु गरौं
GIMP कार्यक्रम खोल्नुहोस्
गर्न को लागी पहिलो कुरा GIMP कार्यक्रम खोल्नुहोस् ताकि यो तपाइँको कम्प्युटरमा चल्छ। एकपटक खोल्दा, फाइल / खोल्नुहोस् र तपाईंले काम गर्न लाग्नु भएको छवि चयन गर्नुहोस्।
यदि यो पहिलो पटक हो भने तपाइँ जिम्प गर्न जाँदै हुनुहुन्छ यो हो तपाईले एउटा मात्र छवि प्रयोग गरेर पूर्ण ट्यूटोरियल हेर्नुहोस्। त्यसपछि तपाइँ यसलाई दुई वा बढी छविहरूसँग गर्न सक्नुहुन्छ।
चयन गर्नुहोस्, सम्पादन गर्नुहोस् र प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
एकचोटि तपाइँसँग छवि छ जसको साथ तपाइँ gif सिर्जना गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाइँ जानु पर्छ चयन गर्नुहोस् / सबै मेनु। यो प्रकार्यले के गर्छ? तपाईंसँग पूरै संकेत गरिएको छवि हुनेछ, यसरी यस्तो देखिन्छ कि तपाईं यसलाई काट्न जाँदै हुनुहुन्छ।
जे होस्, तपाईले के गर्नु पर्छ सम्पादन / प्रतिलिपि मेनुमा हिट छ।
अहिलेसम्म, gif जीवनमा आउन बाँकी छ। तर यो क्षण देखि यो हुनेछ। र तपाईंले लिनु पर्ने अर्को चरणमा जानु हो तह मेनु र त्यहाँ नयाँ तह चयन गर्नुहोस् र, बाहिर आउने मानहरू छोडेर, स्वीकार गर्नुहोस्।
हामीले अघिल्लो चरणमा गरेको प्रतिलिपि याद छ? यसले हामीलाई सम्पूर्ण छवि प्रतिलिपि गर्न अनुमति दियो, र अब हामीले यसलाई यो नयाँ तहमा "डम्प" गर्न आवश्यक छ। अर्को शब्दमा, तपाईंले यसलाई टाँस्नु पर्छ।
यो गर्नको लागि, तपाइँ टाँस्न वा सम्पादन / टाँस्नुहोस् मेनुमा जान नियन्त्रण + V कुञ्जीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसले प्रारम्भमा फ्लोटिंग चयन सिर्जना गर्नेछ, यसको मतलब यो तहमा लिङ्क हुने छैन जबसम्म तपाइँ यसलाई क्लिक गर्नुहुन्न र तह डक गर्नुहुन्न।
नयाँ तहसँग काम गर्दै
छवि अहिले छ एउटै छवि संग दुई तहहरू। यद्यपि, यो दोस्रो तहको साथ हामी काम गर्न जाँदैछौं।
र हामी के गर्न जाँदैछौं? जाऊ त्यहाँ तह मेनु / रूपान्तरण / तेर्सो फ्लिप।
त्यो हो, हामी के गर्नेछौं छविलाई उल्टो पार्छौं। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँसँग बायाँ हातले हल्लाउँदै गरेको बच्चाको फोटो छ भने, यसलाई तेर्सो रूपमा पल्टाउँदा उसले दाहिने हातले हल्लाउँदै गरेको देखिन्छ।
एनिमेशन बचत गर्नुहोस्
स्रोत: लिनक्स ल्याब
हामीले लगभग सकिसकेका छौं, किनकि हामीले यसलाई बचाउन बाँकी छ। र तपाइँ सोच्नुहुनेछ, एनिमेसनको बारेमा के हो? शान्त। यसका लागि तपाईंले फाइल/एक्सपोर्ट एजमा जानुपर्छ।
तपाईंले यसलाई एउटा नाम दिनुपर्छ र तपाईंले यसलाई बचत गर्न चाहनुभएको विस्तार चयन गर्नुहोस्, जुन यस अवस्थामा gif हुनेछ।
अर्को देखा पर्ने स्क्रिनमा तपाईंले "एनिमेसनको रूपमा" बक्स जाँच गर्नुपर्छ। र कम्तिमा 250 मिलिसेकेन्डको एक तह र अर्को बीचमा ढिलाइ राख्नुहोस्। तपाईले समय परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सिर्जना गर्न चाहनुभएको डिजाइन अनुसार।
अन्तमा, तपाईंले सेभ थिच्नु पर्छ र यो पूरा हुनेछ। यसलाई अगाडि बढाउन वा पुन: टच गर्नका लागि यसलाई हेर्न मात्र छोडिनेछ (यसैले तपाईंले यसलाई समीक्षा नगरेसम्म छवि वा कार्यक्रम बन्द नगर्नु महत्त्वपूर्ण छ)।
GIMP सँग gif बनाउनको लागि एक अतिरिक्त चाल
विषय छोड्नु अघि (यद्यपि तपाईलाई शंका छ भने तपाईले हामीलाई आफ्ना प्रश्नहरू कमेन्टमा छोड्न सक्नुहुन्छ र हामी तिनीहरूलाई जवाफ दिने प्रयास गर्नेछौं) हामी तपाईंलाई थप चाल दिन चाहन्छौं। र त्यो हो, जब तपाइँ एनिमेसन बनाउनुहुन्छ तपाइँ यसलाई एक पटक मात्र सार्न चाहनुहुन्छ। वा यसलाई बारम्बार हुन दिनुहोस्।
यदि यो दोस्रो विकल्प हो भने, तपाईंले गर्नुपर्छ "पर्पेचुअल लूप" बक्स जाँच गर्नुहोस्, किनकि यो एक हो जसले आफैलाई बारम्बार दोहोर्याइरहन्छ। अन्यथा, यसले एक पटक आन्दोलन गर्नेछ र यो स्थिर रहनेछ (र यसलाई फेरि सार्नको लागि, तपाईंले छवि बन्द गर्नुपर्नेछ र यसलाई पुन: खोल्न वा स्क्रिन रिफ्रेस गर्नुपर्नेछ)।
यो GIMP सँग gif सिर्जना गर्ने सबैभन्दा आधारभूत तरिका हुनेछ तर यो मात्र होइन। वास्तवमा, जब तपाईंले यसमा महारत हासिल गर्नुभयो, तपाईंले तत्वहरू गायब बनाएर छविको gif सिर्जना गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ (उदाहरणका लागि, ठोस पृष्ठभूमि भएको छवि र यसमा धेरै संख्याहरू)। र, अझ उन्नत, धेरै तस्बिरहरूको साथ एक gif सिर्जना गर्नुहोस्। के तपाइँ जारी राख्न हिम्मत गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » GIMP मा GIF कसरी बनाउने